26-ka June 1960: Xurnimadii Goboladdii Waqooyi ee Somaliya | Xogsame News | Latest News In Africa
Lixdan sano ka hor, maanta oo kale, ayey aheyd markii gobolladii waqooyiga Soomaaliya ee la oran jiray British Somaliland ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii Ingiriiska.
Maalmo kaddibna waxa ay la midoobeen gobolladii koonfurta Soomaaliya ee la oran jiray Italian Somaliland – sidaasna waxaa 1-dii Luulyo 1960-kii ku sameysmay Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Magaalada Hargeysa oo xarun u aheyd maamulka gumaystihii Britain ee gobolladaasi, todobaadyadii ka hor maalinta xoriyadda, waxay kooxihii xorriyad-doonka ahaa ka wadeen diyaar garow aad u ballaaran oo ku aadanaa waynaynta maalintaas.
Waxay dadkii ka qeybgalay maalintaas ku tilmaameen maalin ay wada sugayeen Soomaalida.
Allaha u naxariistee Shamis Abokor Ismaaciil (Guduudo Carwo) oo ahayd haweeneydii ugu horraysay ee Soomaalida Waqooyiga ee heesta, oo na heesteedii ugu horesay ee 1952 laga baahiyay Raadiyo Hargeysa.
Shamis waxay qeyb ka aheyd dadkii diyaarinayay xafladdii debaaldegga xoriyadda ee lagu qabtay Hargeysa. BBCda ayey intii ay noolayd uga warrantay halgankii xorriyadda loo galay iyo maalintii calansaarka ee ku caanbaxday ‘kanna siib kanna saar’.
Guduudo Carwo ayaa wixii dhacay habeenkii calansaarka ee beerta xorriyadda ee Hargeysa waxa ay ku tilmaantay: “Ninkii joogay umbaa joogayee, farxad, oohin baa imikadan i haysa, yacni wax kale ayey aheyd,” ayey tiri.
Calan Soomaaliyeed oo dhul Soomaaliyeed ka dul babaday
Maalmihii ka horreeyay inta aanan xorriyad buuxdo la siin gobollada waqooyi, sida uu jawiga ahaa waxaa inooga warramay Janaraal Jaamac Maxamed Qaalib, oo xilligaas ka mid ahaa saraakiisha booliska gobollada waqooyi, israacii ka dibna ka mid noqday madaxdii sarsare ee booliska Soomaaliya.
“Toddobaadkii ka horreeyay habeenkii 26-kii Juun wuxuu iska ahaa damaashaad, barnaamij baa laga qoray maalin walba wixii dhacayay ee laqabanayay, illeen barigaas dunida badankeeda baa xornimo qaadaneysay,” ayuu yiri Janaraal Jaamac Maxamed Qaalib.
Markii la soo gaaray maalintii iyo habeenkii la isku badelayay labada calanna, dadkii joogay oo ay ka midka aheyd Guduudo Carwo waxa ay ku tilmaantay inay aheyd markii ugu horreysay ee “calan Soomaaliyeed oo xor ah uu dhul Soomaaliyeed oo xor ah ka dul babado.”
Xuska 26 June: Farmaajo iyo Muuse oo jeediyay hadallo kala fog
Aftida laga yaabo inay madaxweynaha Ruushka u sahasho inuu xilka hayo 36 sano